Ukukhanya kwentsimbi kwandisa izisombululo ezitsha zokusebenzisana kude I-NAB bonisa iindaba | I-2020 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB Veza UKUPHILA. Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Ikhaya » Okufumaneka » Ukukhanya kwe-Iron kwandise izisombululo ezitsha zokusebenzisana okude
Umboneleli weenkonzo zasemva kwemveliso uyaqhubeka nokwenza ubuchule ngaphandle kokulalanisa, ebhengeza iinkonzo ezibanzi, eziguqukayo ezikude kunye nezongezo eziphambili kwiqela lobunkokeli.
Ukusukela ekusekweni kwayo kwi-2009, i-Light Iron, inkampani yePanavision, izinikele ekucingeni kwakhona ukuhamba komsebenzi emva kwemveliso. Oko kuzinikezela kwinto entsha kuyenze ukuba inkampani ikulungele ngokukodwa ukuhlangabezana nemiceli mngeni yomzuzu wangoku, apho yonke imboni yemifanekiso eshukumayo inyanzeliswa ukuba iphinde iqwalasele ukuba isebenza njani, ukusuka kulungiselelo ngeposi. Njengoko iimveliso zisanda zikhangela iindlela zokwenza ukuhamba kwazo kude, i-Light Iron iphendule ngoluhlu lwezinto ezintsha ezenziwa nge-dailies, i-offline editorial, i-DI, kunye nokugqiba ukwandisa iindlela zokudala zabathengi naphi na apho basebenza khona, nanjengoko inkampani inikezela izibonelelo ndiqalile kwakhona.
Ukuqhubeka nokuxhasa inkxaso ye-Light Iron kula manyathelo matsha, inkampani yamkele abaphathi abathathu abaziwayo kwiqela labo lobunkokeli. USeth Hallen, uPhil Harrelson, kunye noLaura Borowsky bazokunceda ekukhuliseni iziseko zophuhliso zenkampani, bandise iinkonzo zayo, kunye nenkxaso yangaphakathi kwitalente ngelixa iqhubeka nokukhulisa intsebenziswano, ubuchule, kunye nimble eyaziwayo ngokuKhanya kwe-Iron.
UPeter Cioni-uMlawuli weNtloko yoLawulo
Xa imveliso yamiswa ekuqaleni kwalo nyaka phambi kokutshixwa kwehlabathi ukulwa ukulwa nokusasazeka kwe-COVID-19, iiprojekthi esele zithunyelwe kuye kwafuneka zilungelelanise kubhabho ukuze zithathe ukuhamba kwazo kude. "Kwasekuqaleni, ibiyinjongo yethu kwiLight Iron ukukhokela abathengi bethu kwimveliso yetekhnoloji etshintsha rhoqo kunye nokuhamba komsebenzi ukuze bajonge ekubaliseni amabali abo ngaphandle kokulalanisa," utshilo uPeter Cioni, umlawuli olawulayo ngokubambisana kwiLight Iron. "Kudala sisebenzisa izixhobo eziziimobhayili kunye nentsebenziswano ekude, sikwazile ukutshintsha amagcisa kunye nabaxumi ngaphandle, ngokuzisa amava ethu okungena kumakhaya abo ngaphandle kokuphoswa - okanye ngumhla obekiweyo."
Ukukhanya kwentsimbi yayinguvulindlela wokuqala wokuhambahamba kweedali, kwaye inkampani iyaqhubeka nokwenza ubuchule nge-Outpost Remote Control (RC), isizukulwane samva nje sesisombululo sayo se-Outpost kufutshane neseti, esivumela umbala weLight Iron dailies ukuba ulawule inkqubo epheleleyo. ukude, nokuba umgama ungakanani. Inkqubo ye-Outpost RC inokuhanjiswa ngokukhawuleza kwiofisi yemveliso, kwiziko ledatha, okanye naphina apho kufanelekileyo kwimveliso, ukubonelela ngazo zonke izibonelelo zesisombululo sexesha-elikufutshane ngaphandle kokufuna ukuba umbala abe khona ngokwasemzimbeni. Oku kuvumela imveliso ukuba igcine inani labasebenzi besiza-eshiyekileyo kwindawo ephambili ngexesha le-COVID-19- ngelixa ngaxeshanye linika ababhali be cinema ukuba basebenzisane nawo nawuphi na umbala we-dailies kwiluhlu lweLight Iron, nokuba yeyiphi indawo yombala.
Ukukhanya kwe-Iron kukwandisile izisombululo zokuhlela zokungaqeshwanga ngaphandle kweintanethi ukuzisa amava enkulumbuso yendawo yokunikezelwa kwendawo eseNew York ngqo kubaxumi, bebaxhobisa ngofakelo olupheleleyo lwasekhaya oludityaniswe ngokukhuselekileyo kwiziseko eziphambili zeLight Iron. Ukuhanjiswa kwe-Iron-glavu emhlophe yentsimbi kubonelela ngayo yonke into ayifunayo umthengi, ukusuka kwifenitshala ukuya kwizixhobo zokusebenza-kubandakanya i-SDI yokujonga ukuzithemba-ngenkxaso ebanzi, inyathelo nenyathelo ukuze inkqubo iqhubeke kwaye iqhubeke. Nje ukuba usete, inkqubo yomthengi inxibelelana kwaye ifunde kwindawo ekhuselekileyo Avid Iseva yeNexis ebekwe kwiLight Iron, enofikelelo kwiziseko ezifanayo ezithembakeleyo, inkxaso, kunye namava okugcina ekwabelwana ngawo anokuyonwabela ukuba ayasebenza kweli ziko. Ukurenta kokukhanya okungaxhunyiwe kwi-Intanethi okukhanya okuKhanya kungoku nje kufakwa kwindawo yesiXeko saseNew York, ekwandiseni kwengingqi ekujoliswe kuyo ekuqaleni kuka-2021.
Ukufumana i-DI kunye nokugqiba, i-Iron Light ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokunxibelelana (bukhoma) kunye nezisombululo zokujonga kwakhona ukuhlangabezana neemfuno zabathengi. Iiprojekthi eziKhanyiswe nguKhanya ngentsimbi ngokusebenza okukude kubandakanya uthotho Oko Sikwenzayo Kwizithunzi, Okulandelayo, I-Queen's Gambit, I-Haunting ye-Bly Manor, kunye ne-Social Distance, kunye neempawu zobusuku obunye eMiami, Zula mnyama, kwaye Yintoni UMgaqo-siseko Uthetha kum.
Ukongeza, ukusukela emva kwexesha kuJuni, i-Light Iron iphinde yabamba abathengi buqu. Inkampani izinikele ekunikezeleni ngamava akhuselekileyo, abhetyebhetye, kwaye asebenzayo, kwaye imisele iinkqubo ezintsha zokukhusela abathengi abasebenza ngaphakathi, kubandakanya iinkqubo zokucoca ngokubanzi, iinkqubo ezihlaziyiweyo zenkonzo yokutya, kunye nemida engqongqo yokuhlala kunye nokuhamba okufanelekileyo. Imigaqo-nkqubo kunye neenkqubo zamva nje kunye nolwazi lwendawo yangoku kwindawo nganye yokuKhanya kweNtsimbi inokufumaneka kwi-Light Iron's COVID-19 hub hub, www.ayimani.co.il
Ukuxhasa ukwandiswa kweenkonzo, i-Light Iron iye yaqinisa iqela layo lobunkokeli ngokuqesha uSeth Hallen, uPhil Harrelson, kunye noLaura Borowsky.
USeth Hallen-UMlawuli oLawulayo oBambiseneyo
USeth Hallen ujoyina i-Light Iron njengomlawuli olawulayo ngokubambisana, ezisa ubuchule obuninzi kwimveliso kunye neposi kwiqela, kunye namava eminyaka yobunkokeli kunye nolwalamano olubanzi kushishino. Ngemvelaphi njengomnini weyunithi yeshishini ngaphakathi Sony, Usomashishini, kunye nomphathi omkhulu, u-Hallen ngoku usebenza njengo Mongameli we hollywood Umbutho woBuchule (HPA), indima athe wayibamba ukusukela nge2016.
"Ukubukela ukukhula kokuKhanya kwe-Iron kule minyaka ilishumi idlulileyo bekumangalisa," utshilo uHallen. "Kwasekuqaleni, inkampani ibicinga kwakhona ukuba imveliso yenziwa njani ngelixa ikhulisa igama layo kwinkcubeko yosapho egxile kubathengi. Ezi zisombululo zintsha zokuhamba komsebenzi zibonelela abathengi nangakumbi ngaphandle kokuncama nawuphi na umbono wabo wokuyila. Ndihlala ndincoma kakhulu italente yoyilo kwimveliso yeposi, kwaye ndinemincili ngokusebenza nabaculi beLight Iron, abazinikele ngokukodwa ekwamkeleni inguquko ifilimu ubuchwephesha kunye nezisombululo ezintsha zokuhambisa umlingo kwiscreen. ”
UPhil Harrelson -VP wokuSebenza
Njenge-Light Iron's VP ye-Operations, uPhil Harrelson uya kuba noxanduva lokulawula yonke imisebenzi yenkampani, ejolise ikakhulu ekuphumezeni iinkqubo kunye neenkqubo zokunceda abathengi abangcono. IHarrelson inamava angaphezulu kweminyaka engama-20 kwimveliso yasemva kokuphuma
Umzi mveliso kwi-VFX, ii-dailies, imveliso, kunye nentengiso, kubandakanya iminyaka emithandathu esebenza eDeluxe. Uzisa iseti yezakhono ezahluka-hlukeneyo awaziphuhlisayo njengabaxhasi- esebenze ngaphezulu kweshumi leminyaka njengomphathi wesithuba kunye nomvelisi weposi kuthotho kunye neempawu- kunye nomthengisi.
ULaura Borowsky-UMlawuli woPhuhliso lweShishini
UMlawuli oMtsha woPhuhliso lweShishini uLaura Borowsky uzisa amava akhe ngokubanzi aqoqwe ngaphezulu kweminyaka eli-19 esebenza kwiimpawu zentente, ii-indies, kunye nentengiso yokwandisa iqela loPhuhliso lweShishini loKhanya, elikhokelwa nguKatie Fvuk. U-Borowsky waqala ikhondo lakhe lobuchwephesha ngeTechnicolor, kwaye ngomsebenzi wakhe wakhulisa ubudlelwane obomeleleyo kunye nabaxumi be studio kunye nezinto zokuyila kubandakanya ababhali be cinema kunye nabalawuli, besenzela ulwalamano olomeleleyo ne Panavision. Isekwe kwi los Angeles, U-Borowsky uvela e-Atlanta, kwaye indima yakhe entsha iya kubandakanya ukugxila ekuphuhliseni imakethi esempuma mpuma.
Sichithe ixesha elininzi siqinisekisa ukuba sineqela eligqibeleleyo lokuxhasa zonke iimfuno zabaxumi bethu, kwaye eli nqanaba lokugaya liphawula inyathelo elilandelayo kule nzame, utshilo uCioni. “USeth, uPhil, noLaura bazisa isixa esikhulu samava oshishino. Ngamnye kubo uya kukhulisa ulwazi lokuyila esinokubanika lona abathengi bethu kwaye basibeke ethubeni elihle lokuqhubeka nokutshintsha ikhosi yethu nangaphaya kokuphazamiseka okubangelwe yi-COVID-19. ”
"Ngaphandle kwemiceli mngeni ebalulekileyo eboniswe kwezi nyanga zidlulileyo, sinethemba ngekamva lomzi mveliso wethu kunye namandla ethu awodwa okuxhasa abathengi bethu," wongeze watsho uCioni. "Njengokuba iposti kunye nemveliso iqhubeka nokuvela, ukuKhanya kweNtsimbi kugxile kwindawo ebihleli ikukuhlala, ekuxhobiseni ubuchule kubathengi bethu. Sisoloko siphuhlisa iindlela ezintsha zokusebenza ukuhlangabezana neemfuno zabo, kwaye sihlala silapha ukubanceda bafumane-okanye benze-esona sisombululo sisiso kwiiprojekthi zabo. Ngolwandiso kwiinkonzo zethu nakubasebenzi, abathengi bethu banokusebenzisa ithuba lokuguquguquka ngakumbi kunangaphambili kwaye bonwabele amava angenamthungo emva kwemveliso eqinisekisa ukuba baya kubona umbono wabo ukusuka kuseto ukuya kwiscreen, nokuba bakhetha ukusebenza phi okanye njani . ”
Malunga nokuKhanya kweNsimbi
I-Light Iron, inkampani yePanavision, yaziwa ngokubanzi njengenkokeli yezobuchwephesha kunye neqabane lobugcisa kwimveliso yokuphela kokuphela kunye nezisombululo zeposi. Abenzi bhanyabhanya, izitudiyo, ezobugcisa kunye neetekhnoloji bathembele kubuchwephesha be-Iron Iron ukuhambisa ukuhamba kwedijithali okuqhubela phambili, ukusuka kwi-dailies kunye nolawulo lwedatha ukuya kumbala wokugqibela kunye neenkonzo zokugcina iindaba. Ngeendawo zokurenta ngaphandle kweintanethi kunye namancedo akuMntla Melika anezinto ezikude, i-Light Iron igxile ekubeni yimbumbulu ukulungiselela iimfuno ezizodwa zefilimu kunye neeprojekthi zeepisodic.
Previous: IQela leVizrt liqesha uDaniel Url ukomeleza ukugxila kwabathengi kuPhuhliso lweMveliso
next: I-Art Loft ingena kwiXesha layo lesi-9 kwi-PBS yaseMzantsi Florida!